Kutheni ndicebisa iiNkampani ze-SaaS ngokuchasene nokwakha iiCMS zazo | Martech Zone
Umlingane ohloniphekileyo wanditsalela umnxeba kwi-arhente yentengiso ndicela ingcebiso xa wayethetha neshishini elakha iqonga lalo kwi-Intanethi. Umbutho ubunjwe ngabaphuhlisi abanetalente kwaye babengavumi ukusebenzisa inkqubo yolawulo lomxholo (CMS)… Endaweni yoko baqhuba besebenzisa isisombululo sabo esilungiselelwe ekhaya.
Yinto endakhe ndayiva ngaphambili… kwaye ndicebisa ngokuchasene nayo. Abaphuhlisi bahlala bekholelwa ukuba i-CMS yitafile yedatha apho kugcinwa khona umxholo kwaye inokuhlaziywa ngokulula njengoko kufuneka. Kodwa balahlekile amakhulu eempawu ezibonelelwa yi-CMS. Ungasathethi ke ngokubaluleka kweshishini lombutho.
Kutheni le nto ungafanelekanga ukuba wakhe i-CMS?
Ukukhangela kunye neZakhono zeMithombo yeendaba kuLuntu - Ndabhala Amanqaku enkqubo nganye yoLawulo loMxholo kufuneka abenayo iiNjini zokuKhangela Kwishishini elinye elinabaphuhlisi abafuna ukwenza oku. Inqaku lihamba kuyo yonke into inkqubo yolawulo lomxholo kufuneka ukuba ibe nayo-ukusuka kwi-sitemaps zeXML, ngokusebenzisa imifanekiso ebonakalayo… eyimfuneko ukukhuthaza kunye nokudibanisa umxholo wakho kwiwebhu ngokulula. Ukutyeshela nayiphi na kwezi zinto kubeka inkampani yakho kwindawo engalunganga xa ukhuphisana nabo. Ungasathethi ke ngokubaluleka kwezinto ezihlala zitshintsha kuzo zombini ukukhangela kunye nentlalontle- ngeendlela ezintsha zokuphucula, ukuzenzekelayo, ukwenza ngcono, kunye nokudibanisa umxholo wakho kula majelo kunye namajelo.
Izinto eziphambili kuPhuhliso -Ukuba uzisa iqonga elikwi-intanethi ebomini, iqonga lakho alisoze Zenziwe. Iimpawu, amanqaku, ukudityaniswa ... kwegazi lobomi bakho liqonga lakho elikwi-intanethi. Ngenxa yoko, inkqubo yolawulo lomxholo oyisiseko eyakhiweyo kufuneka ibekwe kude kuluhlu lwezinto eziphambili ngokubaluleka. Njengoko iqela lakho lokuthengisa lijonga ukwandisa kunye nokukhuthaza umxholo ukuqhuba ukuthengisa, banqatshelwe kukungabikho kweempawu kwi-CMS yakho ekhulile ekhaya. Ngenxa yoko, ukuthengisa kunye nentengiso azinakufezekisa amandla abo apheleleyo. Ukuphunyezwa kwe-CMS eyamkelwe ngokubanzi kuthetha ukuba kukho inkxaso eqhubekayo kunye nezixhasi eziza nayo. Oo shishino abaxhasa i-CMS banayo njenge zabo kuqala, kwaye ishishini lakho lingagcina akho iqonga njengeyona nto iphambili kuwe.
Yindleko engeyomfuneko- Kutheni le nto ungazama ukuyila kwakhona into esele yakhiwe? Iqonga elinje WordPress inamakhono amangalisayo ngetoni yokuguquguquka. Ukuba iqela lakho lifuna, linokusebenzisa iWindowsPress njenge ezingenasiphelo CMS… Apho iqela lakho lentengiso linokusebenzisa zonke izakhono zalo, kodwa iqela lakho lophuhliso linokusebenzisa iWindowsPress API ukuyipapasha kwaye uyihlanganise kwiqonga lakho. I-WordPress inokusebenzisa ukuSayinwa ngaMnye (i-SSO)… ukubelana ngamagama abasebenzisi kunye neephasiwedi ngeqonga lakho. IWordPress inokubanjelwa nakwisikhokelo esisezantsi… okanye iapps yakho inokusebenzisa ukubuyela umva.
Cinga ngeminye yeqela lakho lokuthengisa elinokufuna ukumilisela.
Mhlawumbi unqwenela ukwandisa umxholo wephepha, ukongeza amacandelo, kunye nokufaka iikholamu… ngaba i-CMS yakho inako ukuba bhetyebhetye?
Mhlawumbi bafuna ukongeza ubhaliso lomsitho… ngaba ii-CMS zakho zinakho ukuthumela izakhelo zokucwangcisa kunye nezikhumbuzo?
Mhlawumbi ufuna ukufaka i-ebook yasimahla, ngaba iqela lakho lokuthengisa linakho ukubakho ngokungena ngenjongo yokuphuma kunye nokulungelelanisa imihlaba yokubhalisa?
Mhlawumbi unqwenela ukwahlula abaxhasi bakho kubathengi bakho-ngaba unazo iindlela zokwahlulahlula ezi ndidi zimbini zokugcwala kwi-analytics ukufumanisa impembelelo yakho yentengiso?
Mhlawumbi unqwenela ukwenza iincwadana zakho zisebenze kwaye udibanise iiposti zebhlog zakho zamva nje ukuze kungabikho mfuneko yakha i-imeyile qho ngeveki… unayo i-RSS feed eyenzela ukuba wenze oko?
Kukho ngokoqobo amakhulu eziganeko ezifuna ukuba bhetyebhetye kwinxalenye ye-CMS yakho ukuze unyuse ngokupheleleyo umxholo wakho kwimizamo yakho yokuthengisa. Iqela lakho lophuhliso liza kuba nexesha elinzima lokugcina i-CMS yanamhlanje enezinto ezininzi zabaphuhlisi abasisigxina abenza lukhuni kwaye baxhase amandla abo e-CMS… kunye nemixholo emininzi kunye nabaphuhlisi be-plugin abakwandisa oko kubanakho.
Kwaye mhlawumbi kuya kufuneka udibanise i-CMS
Ndibonelele ngezizathu ezimbalwa ezichaseneyo ukwakha i-CMS. Olunye uluvo olungakhankanywanga apha ngasentla ngamathuba aza nokudibanisa eyakho iqonga eliphambili ngeCMS.
Enye inkampani endandisebenza nayo yayinombhalo olula onokufakwa kwindawo yakho yokuchonga amashishini awayefika kwindawo leyo. Ndiphuhlise iplagi yeWordPress eyongeze ngokuzenzekelayo iskripthi kwaye yanikezela umbono kwiWordPress kubo. Xa iplagi yapapashwa kwindawo yokugcina iWindowsPress, ukwamkelwa kwabo kwanda. Ngoba? Kungenxa yokuba abasebenzisi beWordPress bahlala bekhangela iiplagi ezibonelela ngeempawu abazibonelelayo.
Ukuba abaphuhlisi bakho bakhe iphaneli enkulu yolawulo bayidibanisa ngePlagi yeWordPress, uyayandisa kakhulu ukufikelela kwakho kwe-SaaS. Xa banezigidi zokuphumeza kwihlabathi liphela kwaye ujonge ukwandisa ukubonakala kwakho… isikhombisi seCMS sinokuba yindawo entle yokwazisa ngeqonga lakho.
Gcina izixhobo zakho zophuhliso zasimahla ukuxhasa umgca wengeniso yenkampani-iqonga lakho. Sebenzisa inkqubo yolawulo lomxholo ukuze usebenzise ngokupheleleyo ubuchule bokuthengisa umxholo.
tags: Yakha vs uthengeCMScms kunye seocms kunye nemidiya yoluntuUphuhliso lweecmsInkqubo yolawulo lomxholoezingenasipheloiintloko ezingenantlokoUmmeli obuyela umvaI-Wordpress api